sarkaal ka tirsan raaskanbooni ayaa sheegay in ay u diideen wasiirada in ay u galaa kismaaya gudaha – idalenews.com
Sarkaal ka tirsan Ururka Raaskambooni oo ka mid ah dhinacyada isku haya magaalada ayaa sheegay inay u diideen wafdigii uu hogaaminayay Wasiirka Gaashaandhiga inay gudaha u galaan magaalada Kismaayo.
Wafdiga Wasiirka gaashaandhiga ayaa xalay ku hoyday garoonka diyaaradaha Kismaayo, kadib markii ciidamada Kenya ay u sheegeen in aanay ammaankooda damaanad qaadi karin, hadii ay gudaha u galayaan magaalada.
Col. C/llaahi Cusmaan Yalaxow oo ka mid ah saraakiisha Raaskambooni ayaa sheegay inay u diideen wafdiga wasiirka inay magaalada galaan, isagoo ku eedeeyay inay qeyb ka yihiin dhibaatada ka taagan magaalada.
“Wasiirka gaashaandhiga iyo wafdigiisa mushkilada halkan ka jira ayay dab ku sii shidayaan, waana u diidnay inay magaalada galaan, dowladda Soomaaliya iyadaa dhibaatada wada, markii Ra’iisul Wasaaruhu halkan imaanayay hal mar xataa ma aanu tagin Jaamacada Kismaayo, markii magaalada booqanaya, taas waa cadahay in ay mushkilada qeyb ka yihiin”ayuu yiri Sarkaalkan.
Sidoo kale Afhayeenka Maamulka KMG ee Kismaayo C/naasir Seeraar ayaa qaar ka mid ah warbaahinta u sheegay in aanay ka war heyn wafdi ka socda dowladda oo Kismaayo yimid, isla markaana aan lagu soo wargelin.
Kulamo ayaa uga socda garoonka diyaaradaha Wafdiga wasiirada ah iyo saraakiisha, kuwaasoo ku xayiran garoonka diyaaradaha Kismaayo.
Dhageyso: Wasiirka Gaashaandhiga oo maalintii 2aad loo diidan yahay gudaha Magaalada Kismaayo, iyo Jeneral Fartaag oo Masuuliyiinta dowlada ku tilmaamey Qaswadayaal